Vaovao momba ny dia an-tserasera • Tombontsoa fampiasam-bola • Indostrian'ny fihaonana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Travel Associations News • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona • News News
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Manaova fikafika ho an'ny BuzzHub IMEX vaovao » Page 2
Fiaraha-miasa, fifandraisana ary fiarahamonina
'Buzz Days' isam-bolana no hitarika azy ireo Fanoloran-tena 12 an'ny IMEX ho an'ny 2021 manomboka amin'ny andro fandaharana mifototra amin'ny fiaraha-miasa, Fifandraisana ary fiarahamonina amin'ny 12 Mey.
Ny Andro Buzz voalohany dia hanomboka amin'ny 1500hrs London fotoana miaraka amin'ny fanolorana sy fandraisana avy amin'ny talen'ny IMEX Group, Ray Bloom ary CEO, Carina Bauer. Hanaraka izany ny Keynote 20-minitra, doro tanety akaiky miaraka amin'ny mpandahateny sy ny dinika boribory mifantoka amin'ny lohahevitra. Ny andro dia hikatona amin'ny tontonana mavesatra mifantoka amin'ny anjara andraikitry ny hetsika amin'ny fananganana sy fikojakojana ireo vondrom-piarahamonina, notohanan'i Julius Solaris, Lehiben'ny Engagement ao Swapcard.
Ny Andron'ny Buzz isam-bolana dia hifaneraserana amin'ny tambajotra, fanabeazana manokana, fiaraha-miangona ary ny tsy ampoizina feno fahafinaretana. Ny staples IMEX, toy ny IMEXrun malaza, dia hisongadina ihany koa.
"Ny IMEX BuzzHub dia natao hanomezana lanja azo tsapain-tanana ireo mpividy sy mpamatsy antsika ary, amin'ny farany, hananganana azy ireo hahomby ao amin'ny IMEX America," hoy ny fanazavan'i Carina Bauer, tale jeneralin'ny Vondrona IMEX. "Ny ekipanay dia niasa mafy, niara-niasa tamin'i Smyle sy Swapcard mpiara-miasa aminay, mba hamorona fitambaran-javatra mahaliana ho an'ny sehatry ny hetsika orinasa rehetra. Noho ny ankamaroan'ny sehatry ny indostria mbola mizotra, ary ny fiovana sy ny haavon'ny fiheverana dia niova haingana be, dia fanahy iniana izahay nanisy fotoana sy toerana betsaka ho an'ny tambajotra, hihaonana amin'ireo olona vaovao miaraka amin'ny fahalianana sy fifanakalozan-dresaka. Natambatra tamin'ny fomba tsy ara-potoana ny fomba ofisialy, ary tsaroantsika hatrany fa te-hizaha ny toe-draharaha misy ankehitriny ny olona ary ny tena zava-dehibe dia ny hoe 'iza no' ao amin'ny fiarahamoniny. ”
Hoy ihany i Carina: "Fotoana mety indrindra hanombohana ny IMEX BuzzHub - tsy vitan'ny fampiarahana ny olona rehetra amin'ny 'Road to Mandalay Bay' amin'ny fiomanana mankany amin'ny IMEX America, fa io koa dia fiatoana amin'ny natiora, ny Talking Point misy antsika. Ny lohataona no fotoana be atao indrindra amin'ny tantely ary ireo izay mahalala ny seho mifanatrika dia hahatadidy ny buzz malaza IMEX izay tonga rehefa miditra ny efitrano voalohany ianao! ”
Ny fandaharana feno sy ny filaharan'ny mpandahateny amin'ny Andron'ny Buzz 12 Mey dia havoaka tsy ho ela.
Ny ekipan'ny IMEX dia mamporisika ireo mpiara-miasa aminy, mpividy ary mpamatsy azy hampiasa ilay sehatra vaovao ho toy ny vatofehizoro hananganana ny tenany ho amin'ny fahombiazana any Las Vegas amin'ny volana novambra.
Maimaimpoana ny fisoratana anarana amin'ny IMEX BuzzHub ary hisokatra tsy ho ela. Fampahalalana feno sy rohy manaraka.